#TwitterisDead (Maty Ny Twitter): Izany No Ahian’ireo Mpanohitra Taorian’ny Nandraisan’ilay Orinasa Ny Manamboninahitra Fahiny Tao Amin’ny Tafika Shinoa Hiasa Ao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Avrily 2016 3:01 GMT
Nanahy fatratra i Badiucao, mpanao sariitatra politika, momba ny lasan'ilay tale jeneraly vaovaon'ny Twitter ary nanambara ny fahafatesan'ny Twitter tamin'ny kisariny. Sary tao amin'ny Twitter-n'i Badiucao.
Tsy naharavo ireo Shinoa mpanohitra ny nilazàn‘ny Filoha Tale Jeneralin'ny Twitter, Jack Dorsey, tamin'ny 15 Aprily teo fa noraisin'ilay orinasa ho tale jeneraly vaovao ao aminy ho an'i Shina Lehibe Kokoa i Kathy Chen. Tany aloha i Chen dia niasa ho anà fikambanana nifamatotra tamin'ny Tafi-Panafahan'ny Vahoaka sy ny Ministeran'ny Fiarovana tao Shina, samy andrim-panjakana daholo izy roa ireo.
Arahaba ngezabe tonga soa ato amin'ny Twitter, @KathyChen2016! Manatevina anay izy ary mitàna ny toerana Tale Jeneraly ho an'i Shina
Na voabahana tao Shina hatramin'ny 2009 aza ny Twitter, hitan'ilay sehatra fa nitombo 340% hatramin'ny taona lasa ny isan'ireo mpanao dokambarotra avy amin'ireo orinasa ao amin'ny tanibe Shinoa. Ahitàna ireo marika toy ny Lenovo Group sy Huawei Technologies, isan'ny goavana amin'ny mpanao dokambarotra ireo ao amin'ny tanibe shinoa, ary hatramin'ireo mpampahalàla vaovao ao an-toerana toy ny masoivohom-baovaom-panjakana Xinhua sy ny gazety mpiseho isanandro People’s Daily.
Andraiikitra ho sahanin'i Chen ny fikarohana tetikadim-barotra ao anatin'ny faritra Shina midadasika, araka ny voalazan'i Shailesh Rao, filoha lefitry ny Twitter ho an'ny faritra Azia-Pasifika, Amerika Latina ary ireo Tsena Vao Misondrotra.
Na izany aza, misalasala amin'ny zavatra mety ho ataony ny sasany amin'ireo Shinoa mpampiasa Twitter ao amin'ny tanibe, indrindra fa noho ny toerana nisy an'i Chen tany aloha. Araka ny lazain'ny tatitra iray an'ny BBC Shinoa, teo anelanelan'ny 1999 sy 2005, Chen dia niasa ho anà vondron'orinasa iray izay ireo mpampiasa vola ao aminy dia avy amin'ny Computer Associates International ao Etazonia sy ny Ministeran'ny Filaminam-Bahoaka ao Shina.
Ny Apple Daily, mpamoka vaovao manana ny foibeny ao Hong Kong ihany koa namoaka fa fito taona izy no niasa ho anà ivontoeram-pikarohana iray teo ambany fitantanan'ny Andian-Tafika Faharoa Mpiaro Habakabaka an'ny Tafi-Panafahan'ny Vahoaka, ny tafika mitam-piadiana ao Shina. Mahafehy ny aminy ny fandalovany tao amin'ny Microsoft sy Cisco Systems.
Tsy ny asa efa nataony ihany no mampanahy ireo Shinoa mpiserarasera. Maro no nahita azy ho toy ny mpanara-maso ny bitsika, setry ho an'ny CCTV tambajotran'ny fahitalavi-panjakana, mampangatsiatsiaka:
@cctvnews @jack ndeha isika hiaraka hiasa hilaza amin'izao tontolo izao ny tantara goavan'i Shina
@PekingMike, mpanangom-baovaon'ny New York Times, namaly tamina hanihany :
.@kathychen2016 @cctvnews @jack ahoana ny momba ny hanaovana voalohany indrindra izay hamahàn'ny CCP ny Twitter tsy asiana fepetra? Izany no mety ho tantara GOAVAN'i Shina!
Na izany aza, tsy fotoana hihanihaniana izao ho an'ireo Shinoa mpanohitra ao amin'ny tanibe. Nolazain'i @Badiucao, mpanao sariitatra politika, tao anatin'ny sary vaovao nataony fa maty ny Twitter (jereo ery ambony amin'ity lahatsoratra ity):
#TwitterIsDead: Nambaran'ny Twitter omaly fa @kathychen2016 no Tale vaovao mpitantana ho an'i Shina. Nitatitra ny BBC fa tany aloha izy dia niasa ho anà vondron'orinasa iray izay ny Ministeran'ny Filaminambahoaka ao Shina no isan'ny tompon'ny renivola tao, tamin'ny naha-tomponandraikitra azy tamin'ny sampandraharahan'ny fiarovana ny vaovao. Raha marina izany, vita hatreo ny amin'ny #Twitter, bistro iray nahafahan'ny vahoaka Shinoa nahatsapa fahalalahana sy fitoniana.
Nomarihan'i @Arctosia fa tsy maintsy nanaraka ny tondrozotra politikan'ny Antoko Kaominista Shinoa i Chen mba hahafahany manompo ny Tafi-Panafahan'ny Vahoaka :
Tsy ny tanibe Shinoa ihany no voa amin'io fanapahankevitra io, fa ireo mpampiasa Twitter ao Hong Kong sy Taiwan, izay olona avy amin'ny Antoko Kaominista Shinoa no ao ambadiky ny sampan'ilay sehatra misahana ny Shina Midadasika Kokoa, bekotro maroholatry ny tafika izay nandray anjara tamin'ny fikarohana bala afomanga iray ary nahita ny tsiambaratelon'ny Tafi-Panafahan'ny Vahoaka — izay midika hoe, tsy maintsy nandalo ny fanamarinana ny fiainana taloha fanaon'ny antoko sy ny fanadihadiana politika izy.
Nisy antso misokatra nalefa tao amin'ny sehatra fanangonan-tsonian'ny Trano Fotsy Amerikàna nangatahana ny governemanta Amerikana hanadihady lalindalina kokoa ny lasan'i Chen :
Ny Twitter no sehatra iray hany tokana mahomby ho an'ireo Shinoa Mpanohitra sy mpiserasera ifampizaràny ny vaovao izay raràn'ny governemanta ao Shina, ary hiarovan'izy ireo ny tenany amin'ny alàlan'ny fanavaozany ara-potoana ny sàtany momba izay toerana misy azy ireo na hoe tsy misy ahiana ny aminy na voasambotry ny governemanta ao Shina.
Kanefa, vehivavy iray antsoina hoe ‘陈葵’ [Chen Kui] izay efa niasa ho Tale jeneralin'ny orinasa iray nifandray akaiky tamin'ny Ministeram-panjakàna misahana ny Filaminana ao Shina, no tsy ela akory izao voatendry ho Tale Jeneralin'ny Twitter ao Shina Lehibe Kokoa. Loza henjana mitatao amin'ireo Shinoa mitolona hisian'ny fahalalahana maneho hevitra io. Sady koa fidirana amin'ny fiarahamonin'ny siansa sy teknolojian'i Etazonia.
Raha misary fanoharana ny teny ampiasaina ao anatin'ilay fanangonantsonia, mihetsiketsika fatratra ny governemanta ao Shina amin'ny famotehana ireo tambajotra mpikatroka ao an-toerana sy any ivelany tato anatin'ny taona vitsy. Maro tamin'ireo mpanohitra tena mpanakiana ny governemanta no voaheloka ho manangana ady, mandrisika fisaraham-bazana na fikomiana tsotra izao fotsiny. Noho ny fitomboan'ireo tranga ataony ivelan'ny faritanin'i Shina, toy ny fisamborana voalaza ho nahazo ny mpivarotra boky tao Thailand sy Hong Kong ary ny fandroahana ireo noahiahiana ho Taiwanais mpanao heloka bevava avy any Kenya hody any Shina, tsy mahagaga raha velona ahiahy ireo Shinoa mpanohitra mampiasa ny Twitter hoe mety ho tonga eny ampelatanan'ireo manampahefana ao amin'ny tanibe Shinoa ny fiainan'izy ireo manokana.
Ao amin'ny Twitter, nohazavain'i @godfather3721 tamin'i Jack Dorsey ny antony mahatonga ireo Shinoa mpanohitra ao amin'ny Twitter hitandrina fatratra :
@baiducao @jack Mamoritra ny mpanohitra ny lalàna Shinoa momba ny cyber. Ohatra, raha azon'izy ireo i Badiucao, ho an'ireo izay tsy mahatakatra ny toedraharaha, mety ho tongan'ny manampahefana hatramin'ny fiampangana ho mpivarotena, nanao herisetra bevava,sns…Kanefa, rehefa hàka am-bavany an'i Badiucao ry zareo, ho ampongatr'izy ireo daholo ireo lahatsoratra rehetra nosoratany ary kajiany arakarak'izay ny faharetan'ny sazy famonjàna hahazo azy. Sazy 10 taona an-tranomaizina ary dia izay no vita ny amin'i Badiucao. Ao anaty fitanisan-keloky ny CCTV, tsy hiteny velively mihitsy ry zareo hoe momba ny bitsika nosoratany no anton'ny fanenjehana.